SALAMO 68.1-20	F. 1, 2 | Fitandremana Ankadifotsy
SALAMO 68.1-20	F. 1, 2
NY TOMPO MIHAINO FITALAHOANA
Andriamanitra sy ny fahavalony (1-3). Ny mankahala, ny ratsy fanahy no voalaza eto fa izany no atao hoe fahavalon’Andriamanitra. Nandritra ny dian’ny zanak’Israely ho any amin’ny tany nampanantenaina, dia niteny Mosesy nanao hoe : ”Mitsangàna Jehovah ô, ka aoka hiely ny fahavalonao; ary aoka handositra ny tavanao izay mankahala Anao”(Nomery 10.35). Mitovy tanteraka amin’io ny vavaka ataon’ny mpanao salamo eto. Mafy ny ady ary nitalaho mafy i Davida, indraindray toa ambinina aza ny ratsy fanahy. Andriamanitra mifehy ny zavatra rehetra Izy. Ny rivotra no mampiely ny setroka ; tsy manan-tsafidy ny setroka fa mandeha amin’izay hitondran’ny rivotra azy. Toy izany koa, rehefa miasa Andriamanitra, hampielezany sy feheziny amin’izay tiany ny fahavalontsika. Mitsonika tahaka ny savoka akaiky afo izy, tsy manan-kery, ary tsy hahatohitra an’Andriamanitra sy izay olona mandeha amin’ny fahatahorana Azy (2).
Andriamanitra sy ny olo-marina (4-8). Ireo mankatò sy matoky Azy no atao hoe marina na ny olonao ; ao anatin’izany ny kamboty sy ny
mpitondratena. Manana Teny Fikasana maro ho azy ireo Andriamanitra ao amin’ny Baiboly ; tsy misy tokony hampahory fa miahy azy ireny ny Tompo. Noho izany, nahoana moa no tsy hiravoravo sy hifaly, mihira sy mankalaza an’Ilay Andriamanitra Tsitoha ny olo-marina ?
Firavoravoana sy fiderana an’Andriamanitra (9-20). Manome fandresena lehibe ny vahoakany ny Tompo fa vaky mandositra ireo mpanjaka be miaramila (12). Ny hakanton’ny orampanala fotsy manjelatra tarafin’ny hazavana no sary entina maneho ny hafaliana tao amin’ny zanak’Israely rehefa nandresy izy. Samy manana ny enta- mavesatra isika (ara-pahasalamana, ara-bola, ara-pifandraisana…) eo Ilay Tompo hisolo toerana antsika raha ankinintsika Aminy amin’ny vavaka izany (19).